दशैँ : अक्षता, जमरा र आर्शीवादको यस्तो अर्थ, तपाईलाई थाहा छ ? - Birgunj Sanjalदशैँ : अक्षता, जमरा र आर्शीवादको यस्तो अर्थ, तपाईलाई थाहा छ ? - Birgunj Sanjalदशैँ : अक्षता, जमरा र आर्शीवादको यस्तो अर्थ, तपाईलाई थाहा छ ? - Birgunj Sanjal
राजेशमान सिंह छाता 33849
विजयकुमार सरावगी सुर्य 17757
दशैँ : अक्षता, जमरा र आर्शीवादको यस्तो अर्थ, तपाईलाई थाहा छ ?
२१ आश्विन २०७६, मंगलवार ०५:५८
दशैँ, नेपालीहरुको सबैभन्दा महान चाड मात्र नभएर सर्वाधिक लामो समयसम्म मनाइने चाड पनि हो । सोह्र श्राद्ध शुरु हुँदानहुँदै दशैं लागेको अनुभूति हुन्छ । घरआँगन सफा गर्नेदेखि आवश्यक सामाग्रीहरु जोहो गर्नेसम्मका कार्यहरु हुन थाल्छन् । घरका ठूलाबडा सटहि पैसा, खसीबोका, अन्न, खाद्यन्न सामाग्री, पूजाआराधना लगायत आवश्यक कुराहरु व्यवस्थापन गर्नमा व्यस्त हुन्छन् भने बालबालिकालाई पिङ, चङ्गा, नयाँ लुगा, दक्षिणा र मीठो खानेकुराकै रौस हुन्छ । जे होस् दशैंमा रमाइलो गर्ने सबैको आआफ्नै तरिका छ ।
तर, दशैँमा सबैका लागि उत्तिकै महत्व राख्ने तीन अपरिहार्य तत्त्व हुन् ः अक्षता, जमरा र आशीर्वाद । यी तीनविना दशैं खल्लो लाग्छ । बेरसिलो जस्तो । सरल भाषामा भन्दा, दशैं शुरु भएदेखि गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापको निकाश हुन् यी तीन तत्त्व । मान्यजनको हातबाट टीका, जमरा र आर्शीवाद थापेपछि मात्रै दशैं मनाएझैं लाग्छ । हुन त, हिन्दू परम्परा अनुसार अक्षता र आर्शीवाद हरेक शुभकार्य वा धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । तर, दशैंको अक्षता र आर्शीवादको कुरै वेग्लै । जमराको उपस्थितिले झन् सुनमा सुगन्ध थपिदिए जस्तो लाग्ने । जे होस् अक्षता, जमरा र आशीर्वादले इतिहासदेखि नै छुट्टै विशेषता प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन् ।
धान, मकै, गहुँ, विशेषतः जौ आदिजस्ता अन्नबाट उम्रिएका ससाना पहेँलो टुसा नै जमरा हो । यसको प्रयोग दशैंमा मात्रै गरिने भएकाले पनि नेपाली संस्कृतिमा यसको महत्त्व झनै बढी भएको हुनसक्छ ।
घटस्थापनाको दिन विधिवत् रुपमा माटोमा अन्न छरेर, सूर्यको प्रकाशभन्दा टाढै राखेर उमारिने जमरालाई सो दिनदेखि दशमीसम्म हरेक दिन पानी हालेर हेरविचार गरिन्छ ।
अन्नबाट अंकुरित जमराले सांस्कृतिक महत्त्व त बोकेकै छ, यसका अतिरिक्त स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि यसको उपयोगिता कम छैन । हेर्दा सामान्य घाँसजस्तो लाग्ने जमरा मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायी मानिन्छ ।
अंकुरित खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि उपयागी हुन्छन् । जमरा पनि जौ, मकै, धान, आदिबाट अंकुरित हुने भएकाले यसको सेवनबाट भिटामिन, आइरन, कार्बोहाइड्रेट आदिजस्ता पौष्टिक तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
‘क्षत नभएको’ – अक्षता । नटुक्रिएको अन्न वा चामललाई अक्षता भनिन्छ । त्यसैले पहिला, धानबाट चामल निकाल्दा नटुक्रियोस् भनेर चन्दन घोट्ने काठले घोटेर चोखै सग्लो चामल निकालिन्थ्यो ।
विस्तारै, सिलौटाको ढुंगाले घोटेर अक्षता बनाउन शुरु गरियो । अहिले भने धेरैजसोले खाने प्रयोजनका लागि मिलमा कुटाइएको चामललाई नै अक्षताका रुपमा प्रयोग गर्छन् । टुक्रिएको, नटुक्रिएकोसँग खासै मतलब राखिँदैन ।
अक्षतामा दही र रङ्ग हालेर टीका तयार गरिन्छ । जुनसुकै रङ्ग प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ तर, विशेषगरी दशैंमा रातो र सेतो रङ्ग बढी प्रचलित छ ।
दशैँमा दिइने आर्शीवाद छुट्टै र विशेष छ । अन्य अवसरमा टिका लगाइदिँदा सो आशीर्वादको उच्चारण गरिँदैन । विभिन्न देवता, आदिम युगका राजाहरुलाई सङ्केत गर्दै दिइने आशीर्वाद यसप्रकारको छ ः
आयु द्रोणसुते, श्रीयं दशरथे
शत्रुक्षयं राघवे, ऐशवर्यं नहुषे
गतिश्च पवने, मानं च दुर्योधने
सौर्यं सान्तनवे, वलं हलधरे
सत्यंच कुन्तीसुते, विज्ञानं विदुरे
भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे ।
द्रोणाचार्यको छोराको जस्तो आयु
दशरथ राजाको जस्तो सम्पत्ति
रामले जस्तो शत्रु नाश गर्न सक्ने
नहुष राजाको जस्तो ऐशवर्य
वायु देवताको जस्तो गति
मानं च दुर्योधने
दुर्योधनको जस्तो मान
सान्तनवेको जस्तो सौर्य (सान्तनु अर्थात् भीष्मपितामह)
वलरामको जस्तो वल
सत्यं च कुन्तीसुते
कुन्तीका छोरा युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी
विदुरको जस्तो ज्ञान
त्यो सबै जस्तो तपाईं पनि हुन सक्नुस्
नारायणको जस्तो कीर्ति
तपाईको दशैँ शुभ बितोस् । बडादशैँको शुभकामना